FALIN famoahana vokatra vaovao | Fantaro!
Salama Ny rambon'ny Septambra, namela surprise ho anao koa aho. Eto izahay miaraka amin'ny FALIN anti-radiation negative ion hair dryer! Tsitoha, matihanina, endrika "Avo", voatahy tanteraka. Ahoana no ampisehoan’io mpitsoka rivotra mahery io ny talentany? Avy hatrany ho anao, asehoy tsirairay izy ireo! Mahafinaritra tsy misy...
Nifarana soa aman-tsara ny fampirantiana
Yiwu International Expo ——Fotoana fampandrosoana: 21-25—— Avy amin'ny faritany 18 (tanàna, faritra mizaka tena) manerana ny firenena Ary firenena sy faritra 14 anisan'izany i Japana, Korea Atsimo, Malezia, sns. Orinasa maherin'ny 2.300 no nampiseho olona 104.900 nitsidika ilay tranokala. Amin'ireto ...
Ny 16 Jona 2021, taoriana kelin'ny Festival Boat Dragon, dia nirindra tsara ny maripana ao Lishui, izay mahatratra 36°C nandritra ny andro maromaro. Ny toetr'andro fahavaratra dia mafana, ny mari-pana, ary ny zavatra simika mampidi-doza dia mora voan'ny mari-pana ambony, ary misy antony maro toy ny tselatra ...